Interspire Kufuridzira Yakaomesesa Email Kushambadzira | Martech Zone
Chishanu, December 26, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iyi posvo inotsigirwa. Ivo vanhu veInterspire vari kukwidza bhaa pane Email Service Provider software ine yavo nyowani yekuvandudza, Interspire Email Mutero.
Interspire inopa yakasimba uye yakasimba email yekushambadzira mhinduro inouya seye asingakwanisi sevha yakaiswa vhezheni kana se hosting web based mhinduro. Chimwe chezvinhu zvakasarudzika mushanduro yavo yazvino (5.5) ndeye yavo yazvino A / B kupatsanura kuyedzwa.
Chairo chipo cheA / B chinoda:
Shanduro isingaenzaniswi yakatorwa kubva kune yako yekunyoresa runyorwa
Patsanura zvisina kujairika sampling mumapoka ekuyedza eemail yega yega
Mushandirapamwe weemail unotumirwa panguva imwechete kuboka rega rega rekuenzanisira
Tumira kune vamwe vese nemhedzisiro yekukunda
Interspire Inogadzira Email A / B Kuedza
Chinhu chine hungwaru cheInterspire's email split split ndechekuti yavo software inotumira email yako yakazara runyorwa otomatiki zvichibva pamhedzisiro yekuyedzwa kweA / B!
Pamwe chete neSplit Testing uye Automation, iyo ichangoburwa yavo Email Kushambadzira software akawedzera zvinotevera zvinhu:
zvinokonzera - Gadzira maemail ekuzvarwa anodzokororwa, fambisa / bvisa vanofambidzana kuenda / kubva pamanyowani akawanda zvichienderana kana vakavhura email yako kana kudzvanya pane yakatarisana kubatana uye zvakawanda zvimwe.
Chiitiko kutema - Nemaoko nyora zviitiko zvakadai sekufona uye misangano. Otomatiki chiitiko kutema matanda kunogadzira chiitiko chekubata pavanogamuchira email / autoresponder, vhura email kana tinya chinongedzo kuti iwe kana timu yako muve nekuonekwa kwakazara muzviito zvavo nguva dzese, zvichikuita iwe mutengesi ane ruzivo.
Razvino chiitiko logi - Zvinhu zvako zvichangobva kuwanikwa (zvinofambidzana, zvinyorwa, macampaign, nezvimwewo) zvinogara zviripo pamusoro pechiso zvichiita kuti zvive nyore kudzokera kwawakasiya.
Kutaurirana kwemazita mapoka - Shandisa maforodha uye dhonza-uye-kudonhedza kuronga uye kuronga ako emazita emazita mumapoka anotaridzika. Yakanakira vatengesi veemail vane gumi nemazana kana mazana ezvinyorwa.
20 matsva akavakirwa-mukati maemail templates - Iko kune matsva magadzirirwo uye zvakare magadzirirwo anoenderana kutaridzika uye kunzwa kweako Interspire Shopping Cart-powered online chitoro. Iye zvino chitoro chako neemail mishandirapamwe zvinogona kugovana mabhenji akafanana
Kana iwe uri kutsvaga kubatanidza email yekushambadzira mhinduro kune yako application, Interspire's Email Marketer zvakare ine yakasimba kwazvo REST-based API. Zvinyorwa zvavo zvinosanganisira toni yePHP kodhi kodhi zvakare!
Kudzoreredza chinhu CHINODIWA Kushambadzira Tactic